Ka soo dejiso animations-ka bilaashka ah Lottiefiles, oo ah barxad cusub | Abuurista khadka tooska ah
Lottiefiles waa degel aan garaney iyo inay mudan tahay adoo kafaala qaadaya kumanaan animations ku saleysan Json oo aan si fudud ugu isticmaali karno mashaariicdeena webka. Meel aad ku jeclaan doontid daqiiqadda ugu horreysa ee aad degto si aad u ogaato waxa ku saabsan.
Qiimaha weyn ee kuwaan faylasha loo yaqaan 'Lotties' waa xaruntaada, wax yar oo ay miisaamaan iyo miisaankooda weyn si ay ugu adeegsadaan nooc kasta oo qalab ah. Maaddaama ay yihiin dhowr madal waxayna u oggolaaneysaa in lagu isticmaalo qalab kasta oo ay ku jiraan React Native.
Nasiibyada waa la miisaami karaa wakhtiga orda iyo cabirka faylka aad ayuu uyaryahay. Awooddeeda ugu weyn ayaa ah inay u oggolaanayso animations tayo sare leh oo ku yaal dhufto iyo xalal badan iyada oo la isku darayo vectors iyo walxaha waqtiga socodka.
Halkaan ayaa ka dhashay Lottiefiles, madal in waxay u horseedaa imtixaan, iskaashi iyo daah furid animations ay sameeyeen dad badan oo animators ah, naqshadeeyayaal iyo horumariyeyaal. Ujeeddadeeda ugu weyni waa in la soo bandhigo qalab taxane ah oo awood u leh in si hufan loogu hirgeliyo nasiib wanaagyadan mashaariicdayada.
Xaqiiqdii, Elementor wuxuu ku dhawaaqay nooc cusub, websaydhka dhisaha, kaas oo aad ku soo dhoofsan karto nasiibkaas si aad ugu adeegsato saamaynta animation shabakadaha aan ka abuureyno barnaamijkaaga.
Runtuna waxay tahay iyadoo la fiirinayo animations-ka, waan la yaabnay tayada weyn ee ay ku keydsan yihiin. Xusuusnow inaan wajahnay madal animation cusub oo loogu talagalay webka aad isticmaali karto iyo haddii aad adigu sameysid noocan oo kale ah naftaada, waa waqtiga ugu fiican ee la isqorto oo la caddeeyo qiimahaaga.
Un barta xiisaha leh ee animations-ka websaydhka ah ee aan kugu dhiirrigelinno inaad ogaato iyo inay hubaal tahay in la iftiimin doono sannadaha soo socda. Haddii waxyigaagu kaa xumaado ama aadan rabin inaad waqtigaaga ku lumiso abuurista animation runtii qabow u ah foomkaaga ama carousel sawirro, ha lumin waqtigaaga; ha moogaan taxanahan oo ah Koodhka HTML ee menus wareega ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Lottiefiles waa websaydh animations ah websaydhkaaga muhiimka ah laga bilaabo maanta
Qorshaha xariifnimada Banksy ee taallada Colston ee Bristol
Sawir gacmeed dhab ah oo ku yaal bartamaha dabiiciga si loo muujiyo saameynta xilliyada